भेन्टिलेटरमा २५ दिन कोरोनासँग लडेर बाँचेका सुमन – Health Post Nepal
२०७७ असोज ३० गते ७:२८
तर, सुमनलाई भने दिनहुँ झन्–झन् गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि उनी असोज १३ गते काकाकी छोरी (बहिनी) सँग भक्तपुर च्याम्हासिंहमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा दिउँसो २ बजेतिर इमर्जेन्सीमा भर्ना भए।
उनी करिब एक महिना अस्पताल र २५ दिन भेन्टिलेटर बसेर घर फर्किएका अुज्। घर फिर्किसकेपछि पनि १४ दिन आइसोलेसन बसे। अहिले पनि उनलाई खोकी लाग्न छाडेको छैन। उनी अहिले घरमै शारीरिक व्यायाम, श्वासप्रश्वास व्यायाम गरिरहेका छन्। डाक्टरहरूको सल्लाहअनुसार भिटामिनबाहेक औषधी खाएका छैनन्। विस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएपछि खोकी लाग्न बन्द हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
पूर्णस्वास्थ्य लाभ गरेपछि प्लाज्मा दान गर्छु,’ सुमनले भने, ‘सरकारी अस्पताल होस् त टेकुजस्तो। टेकु अस्पताल र कर्मचारीबाट अरू अस्पतालले सिक्न जरुरी छ। अब चाँडै भक्तपुर अस्पतालबारे प्रशासनमा भन्न जाने सोच बननाएको छु।’
2 thoughts on “भेन्टिलेटरमा २५ दिन कोरोनासँग लडेर बाँचेका सुमन”
Binaya kumar Rajbhandari says:
काेराेना बाट मुक्ति पाएकाेमा भाईलाई बधाई । म पनि काेराेना पाेजिटिभ भएर घरमा नै अाईसाेलेसनमा छाै, हामी दुबै जना। टिचिङ्ग हस्पिटलमा असाेज १५ गते रूघा सामन्य ज्वराे अाएर टेष्ट गरेउ। १८ गते सम्म कतैबाट खबर नअाएकाेले हामी नेगेटिभ हाेला भनेर ढुक्क भएका थियाै, तर १८ गते राती अाठ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट फाेन अाउदा खङ्ग्रङ खुङ्ग्रुङ भयाैं। फाेन गर्ने बहिनीले नअात्तिनु, अति साह्राे नभए सम्म हस्पिटल नजानु भनिन, र ११३३ र १११५ नं. दिईन। केही परे खबर गर्न। हामी घरमा नै बस्याैं। वाफ लिने,कुल्ला गर्ने ताताेमात्र खाने गरेउ। ४ दिनमा ज्वराे त कम भयाे तर खाना नरूच्ने, गन्ध नअाउने र वास्ना नअाउने हुन थाल्याे। तेस पछि हामीले एन्टिबनयाेटिक प्रयाेग गरेउ अाफैले, किन भने फाेन गरेकाे नं. मा कलब्याक गर्दा एक जना भाईले उठाउनु भयाे र भने त्याे बहिनीले मेराे फाेनबाट तपाईलाई खबर गरेकाे भने। अब भन्नुस कति सम्म लापर्वाहि, फाेन पनि अरूकाे प्रयाेग। ११३३ र १११५ मा गर्दा एउटाले हामी त रिपाेर्ट मात्र जानाकरि गराउने रे,अर्काेले हामी त साह्राे गह्राे परे हस्पिटलमात्र पुर्याउने भने। रिपाेर्ट माग्दा जहाँ टेष्ट गरेकाे तेहि गएर ल्याउनु भने, तेसैले हामी पाजिटिभ भनेर थाहा छ, तर भाइरल लाेड कति छ थाहा छैन। अाईसाेलेसनमा भएकाेले बाहिर निस्केका छैनाैं। तेसैले अाफैले एन्टिबायाेटिक खान थाल्याैं्। खाएकाे दुई दिनमा नै हामीमा परिबर्तन अायाे, खाना रूच्याे, वासना अाउन थाल्याे र गन्ध पनि सुरू भयाे। मैले अाफ्नाे अबस्था फेसबुकमा हालेकाे थिय, परिवारजन, ईष्टमित्र र साथीभाईले हाैसला दिई रहे। फाेन गरि रहे, हाम्राे अबस्था बारे जानकारि लिई रहे। अाज ३० गते सम्म सबै राम्राे भई रहेकाे छ। हामीले अरूलाई नसराेस भनी अर्काे दुई हप्ता घरमा नै बसेर बिताउने भयाैं। कहाबाट सर्याे पत्ताे छैन, गत दुई महिनादेखि कतै कसैकाेमा गएका थिएनाैं,तर काेराेना पाजिटिभ चै भयाैं। शुरूमा भाइ हरूले खाने समान तरकारि ल्याई दिए। पछि भाईलाई पनि काेराेना देखियाे। हाल उनीहरू हाल अाईसाेलेसनमा छन। अहिले खाने कुरा यहिकाे पसले ले लयाई दिन्छ, भरेङ्गमा छाेड्छ, उ गई सके पछि हामी उठाउछाैं। पनि लिन पनि एउटा ठुलाे बाल्टिन बरन्डामा राखेका छाै, पसलेले जारमा ल्याएर खन्याएर जान्छ कतै नछाेई। उनीहरूलाई पनि त बचाउनु पर्याे नि हाईन र?
यसरी हाम्रा दिन बित्दै छन। अाज त धेरै राम्राे भएकाे महसुस गरेका छाैं। तर सम्बन्धित निकायकाे लापरेवाही, गैर जिम्मेवारी जवाफ र लाचारि पनले चै साह्रै दुखित बनाएकाे छ।
भाइ लाई फेरि शुभकामना।
Dherai dherai badhai chha
दुई दाँतका लागि आठ खराब खानेकुरा
गोदावरीमा निशुल्क दन्त स्वास्थ्य सेवा दिँदै कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल
कोरोना जोखिमबीच खुल्न थाले विद्यालय (फोटोफिचर)
विदेश जानेह‍रू खोप लगाएपछि फेरि ‘प्रमाण’को सास्ती [फाेटाे फिचर]
आजदेखि जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप, देउवाको स्थलगत अवलोकन [फोटोफिचर]
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीको वितण्डा (फोटोफिचर)
‘स्वास्थ्य सेवा हो व्यापार होइन, सरकार सेवक हो मालिक होइन’